Facebook Story | e-commerce သတင်း
Encarni Arcoya | 26/04/2022 21:23 | ဆိုရှယ်မီဒီယာ
Facebook ကိုနေ့စဉ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ နာရီပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် သိချင်ဖူးလား။ facebook ရဲ့သမိုင်းကဘာလဲ? ဟုတ်တယ်၊ အဲဒါက ကျောင်းသားကွန်ရက်တစ်ခုအနေနဲ့ မွေးဖွားလာတယ်ဆိုတာ ငါတို့သိတယ်၊ အဲဒါက အဆက်အသွယ်တွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ပဲ... ဒါပေမယ့် အဲဒါထက် ဘာများရှိသေးလဲ။
ယခုတစ်ကြိမ်တွင် “Meta” အင်ပါယာ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် လူမှုကွန်ရက် မည်သို့ဖြစ်တည်လာပုံကို လေးလေးနက်နက် သိရှိနိုင်ရန် ဤတစ်ကြိမ်တွင် သုတေသန အနည်းငယ် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ အဲဒါကို မင်းလည်း သိချင်လား။
1 ဖေ့စ်ဘုတ်ကို ဘယ်လို မွေးဖွားလာတာလဲ။
1.1 Facebook မတိုင်ခင်က ဘာတွေဖန်တီးခဲ့လဲ။
2 ဆီလီကွန်တောင်ကြားသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
3 2005 ခုနှစ်သည် Facebook သမိုင်းတွင် အဓိကကျသောနှစ်ဖြစ်သည်။
4 ၂၀၀၆ ခုနှစ်အတွက် ဒီဇိုင်းအသစ်
5 ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် လူကြည့်အများဆုံး လူမှုကွန်ရက်ဖြစ်ခြင်း၏ နိမိတ်ပုံ
6 ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကျော်ကြားဆုံး ပလပ်ဖောင်း
7 Facebook မှတ်တမ်းသည် Instagram၊ WhatsApp နှင့် Giphy တို့နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
8 Facebook မှ Meta သို့ပြောင်းပါ။
ဖေ့စ်ဘုတ်ကို ဘယ်လို မွေးဖွားလာတာလဲ။
ဖေ့စ်ဘုတ်မွေးတဲ့ရက်အတိအကျသိလား။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်။. ထိုနေ့သည် ရှေ့နှင့်နောက်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုနေ့သည် ဖွားမြင်သောနေ့ဖြစ်သောကြောင့်၊အဆိုပါ Facebook က"။
ဤကွန်ရက်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ၊ ဟားဗတ်ကျောင်းသားများသည် အချက်အလက်များကို သီးသန့်မျှဝေနိုင်သည်။ သူတို့ကြားထဲမှာပဲ
၎င်း၏ဖန်တီးရှင်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် လူသိများသည်။, Mark Zuckerberg ဟာထိုအချိန်က သူ့အခန်းဖော်များနှင့် သူလေ့လာခဲ့သည့် ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသားအချို့ထက် သူ့ကို ပိုသိကြသော်လည်း၊ ဒါပေမယ့် Facebook တစ်ခုတည်းကို ဖန်တီးတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တခြားကျောင်းသားတွေနဲ့ အခန်းဖော်တွေနဲ့ လုပ်တယ်။: Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, Andrew MacCollum o Chris Hughes က. လူမှုကွန်ရက်ကို ပေးဆောင်ရသူအားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ် အစမှာ လူမှုကွန်ရက် ဟားဗတ်အီးမေးလ်ရှိသူများအတွက်သာဖြစ်သည်။. မင်းမရှိရင် မင်းဝင်လို့မရဘူး။
ပြီးတော့ အဲဒီတုန်းက ကွန်ရက်က ဘယ်လိုလဲ။ ယခုနှင့်တူသည်။. သင့်တွင် အခြားသူများနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သော၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များထည့်ရန်၊ သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုများကို မျှဝေနိုင်သည့် ပရိုဖိုင်တစ်ခုရှိပါသည်...
တကယ်တော့, တစ်လအတွင်း Harvard ကျောင်းသားအားလုံး၏ 50% စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ကိုလံဘီယာ၊ ယေးလ် သို့မဟုတ် စတန်းဖို့ဒ်ကဲ့သို့သော အခြားတက္ကသိုလ်များအတွက် စိတ်ဝင်စားမှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
အဲဒါကို ဖန်တီးခဲ့တာက အလုံးအရင်းပါပဲ။ နှစ်ကုန်တွင်၊ လက်တွေ့အားဖြင့် US နှင့် Canada ရှိ တက္ကသိုလ်များအားလုံး မှတ်ပုံတင်ပြီးဖြစ်သည်။ ကွန်ရက်တွင် အသုံးပြုသူ တစ်သန်းနီးပါးရှိနေပြီဖြစ်သည်။
Facebook မတိုင်ခင်က ဘာတွေဖန်တီးခဲ့လဲ။
သိတဲ့သူနည်းတဲ့အချက်ကတော့ Facebook ပါ။ Mark Zuckerberg ရဲ့ ပထမဆုံး ဖန်တီးမှုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ က ဒုတိယပါ။ တစ်နှစ်စောပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ သူနဲ့ရွယ်တူတွေကို ဖျော်ဖြေဖို့ Facemash ဆိုတဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။လူတစ်ဦးအား ၎င်းတို့၏ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ဖြင့် အကဲဖြတ်ရန် အကြံကောင်းဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး မည်သူက ပိုချောမောသည် (သို့မဟုတ် ပိုပူသည်) ကို သိရန် အဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ သိသာသည်၊ နှစ်ရက်လောက်ကြာတော့ ပိတ်လိုက်တယ်။ ဓါတ်ပုံတွေကို ခွင့်မပြုဘဲ သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ ထိုနှစ်ရက်အတွင်း ကြည့်ရှုမှုပေါင်း 22.000 ရရှိခဲ့သည်။
မင်းရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာ ပွက်ပွက်ဆူလာသလိုမျိုး၊ Mark သည် Palo Alto တွင်အိမ်တစ်လုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အချိန်တန်ပြီဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ ထိုနေရာတွင်၊ လူမှုကွန်ရက်တွင်ရှိသော အလေးချိန်အားလုံးကို စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် ပံ့ပိုးနိုင်စေရန် ၎င်း၏ လည်ပတ်ရေးစင်တာကို ပထမဆုံးအကြိမ် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, Napster ကိုတည်ထောင်သူ Sean Parker နှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ PayPal ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Peter Thiel မှတဆင့် ဒေါ်လာ 500.000 (ယူရို 450.000 ခန့်) ရင်းနှီးမြှပ်နှံနိုင်စေခဲ့သည်။
2005 ခုနှစ်သည် Facebook သမိုင်းတွင် အဓိကကျသောနှစ်ဖြစ်သည်။
ငါတို့ပြောနိုင်တယ် 2005 သည် Facebook အတွက် ကောင်းသောနှစ်ဖြစ်သည်။. ပထမအချက်က သူ့နာမည်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ပါ။ "ဖေ့စ်ဘုတ်" မဟုတ်တော့ဘဲ ရိုးရိုး "ဖေ့စ်ဘုတ်"၊.
ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်တယ်။ အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ အခြားနိုင်ငံရှိ အထက်တန်းကျောင်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များ၏ အသုံးပြုသူများနှင့် အသုံးပြုသူများထံသို့ လူမှုကွန်ရက်ကို ဖွင့်လှစ်ရန်ဖြစ်သည်။ နယူးဇီလန်၊ သြစတြေးလျ၊ မက္ကဆီကို၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ အိုင်ယာလန်ကဲ့သို့...
ဆိုလိုသည်မှာ ထိုနှစ်အကုန်တွင် ၎င်း၏အသုံးပြုသူ နှစ်ဆတိုးလာသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ 2004 နှစ်ကုန်မှာ လစဉ်အသုံးပြုသူ တစ်သန်းနီးပါးရှိခဲ့ရင်၊ ၂၀၀၅ နှစ်ကုန်တွင် ၆ သန်းခန့်ရှိခဲ့သည်။.
၂၀၀၆ ခုနှစ်အတွက် ဒီဇိုင်းအသစ်
ဒီနှစ် လူမှုကွန်ရက်၏ အသွင်အပြင်အသစ်ဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။. အစပိုင်းတွင် ၎င်း၏ဒီဇိုင်းသည် MySpace ကို အလွန်သတိရပြီး ထိုနှစ်တွင် သက်တမ်းတိုးရန် လောင်းကြေးထပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Primero, ထင်ရှားကျော်ကြားလာစေရန် ပရိုဖိုင်ပုံကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။။ ပြီးနောက် NewsFeed ကို ထည့်ပေးခဲ့သည်။ဆိုလိုသည်မှာ၊ အသုံးပြုသူပရိုဖိုင်တစ်ခုစီကို ထည့်စရာမလိုဘဲ ထို wall မှတဆင့် အဆက်အသွယ်များမျှဝေထားသည်ကို လူများမြင်နိုင်သည့် ယေဘူယျနံရံဖြစ်သည်။
ဆိုတော့ ပိုလို့တောင် ရှိသေးတယ်လေ။ 2006 နှစ်ကုန်တွင် Facebook သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ ရောက်ရှိသွားသည်။. တစ်နည်းဆိုရသော် အသက် 13 နှစ်အထက် မည်သူမဆို (၎င်းတို့သည် ဟားဗတ်မှဖြစ်ရန် မလိုအပ်တော့ပါ) သည် ကွန်ရက်ကို စာရင်းသွင်းပြီး အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဟုတ်ကဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုပါ။
၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် လူကြည့်အများဆုံး လူမှုကွန်ရက်ဖြစ်ခြင်း၏ နိမိတ်ပုံ
2007 တွင် Facebook Facebook Marketplace အပါအဝင် ၎င်း၏ ရွေးချယ်မှုများကို တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ (ရောင်းရန်ရှိသည်) သို့မဟုတ် Facebook Application Developer (ကွန်ရက်ပေါ်တွင်အက်ပ်များနှင့်ဂိမ်းများဖန်တီးရန်)။
ဒါ သူထို့နောက် တစ်နှစ်အကြာတွင် လူကြည့်အများဆုံး လူမှုကွန်ရက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။MySpace အထက်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, နိုင်ငံရေးသမားများက သူမကို သတိထားမိလာသည်။ပလပ်ဖောင်းပေါ်ရှိ ပရိုဖိုင်များ၊ စာမျက်နှာများနှင့် အုပ်စုများ ဖန်တီးခြင်းအထိ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အမေရိကန်ကို အာရုံစိုက်တယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကျော်ကြားဆုံး ပလပ်ဖောင်း
ဖေ့စ်ဘုတ်သမိုင်းကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ခဲ့တာကို ထည့်တွက်ရင်၊ ငါးနှစ်ကြာပြီးနောက်၊ ၎င်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရေပန်းအစားဆုံး platform ဖြစ်လာခဲ့သည်။ဆိုးတဲ့ လမ်းကြောင်းလို့ ပြောလို့ မရဘူး။
အဲဒီနှစ်မှာပဲ သူက “like” ခလုတ်ကို ထုတ်လိုက်တယ်။ ဘယ်သူမှ မမှတ်မိပေမယ့်။
ကွန်ရက်အဖြစ် တက်လာပြီး တစ်နှစ်အကြာတွင် ၎င်းတို့က ၎င်းကို ယူရို သန်း ၃၇,၀၀၀ ဖြင့် တန်ဖိုးဖြတ်ခဲ့သည်မှာ ယုတ္တိတန်ပါသည်။
Facebook မှတ်တမ်းသည် Instagram၊ WhatsApp နှင့် Giphy တို့နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
2010 ကတည်းက Facebook ပါ။ အလည်အပတ်အများဆုံးနှင့် အသုံးပြုသည့် လူမှုကွန်ရက်ဖြစ်ရန် ကြိုးစားရန် လမ်းကြောင်းတစ်ခု စတင်သည်။နှင့် သူ့ကို "ဒုက္ခ" ပေးနိုင်သော အက်ပ်ဝယ်ယူမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ သင့်ကုမ္ပဏီအတွင်း ၎င်းတို့ကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းသည် သင့်အား ပိုမိုတန်ဖိုးရှိစေပါသည်။ အဲဒါက ဘာဖြစ်သွားတာလဲ။ Instagram၊ WhatsApp နှင့် Giphy တို့မှ ဝယ်ယူမှုများ.
ဟုတ်ပါတယ် ကြောက်စရာကောင်းသော ပေါက်ကြားမှုများကဲ့သို့ ကောင်းမွန်သောအရာများ မရှိခဲ့ပါ။ တရားရုံးသို့သွားသည့်တိုင် ၎င်း၏ဖန်တီးရှင်အား အစွန်းအထင်းခံခဲ့ရသည့် အခြားအခြေအနေများ။
Facebook မှ Meta သို့ပြောင်းပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ Facebook ရဲ့ သမိုင်းမှတ်တိုင်တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ မင်းနာမည်ပြောင်း. တကယ်ပြောင်းလဲသွားတာက ကုမ္ပဏီကို လူမှုကွန်ရက်လိုပဲ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Instagram၊ WhatsApp နဲ့ Giphy တို့လည်း ရှိကြပါတယ်။ အရာအားလုံးကို လွှမ်းခြုံနိုင်မယ့် မတူညီတဲ့ နာမည်တစ်ခု လိုအပ်တယ်။. ရလဒ်? meta.
သိသာထင်ရှားသည်မှာ ၎င်းသည် ထိုနေရာတွင်သာ တည်ရှိနေရုံသာမက Mark Zuckerberg သည် ““metaverse“ Facebook ၏သမိုင်းကြောင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကို မည်သို့ဆောင်ကြဉ်းလာမည်ကို မည်သူမျှမသိနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် အသုံးပြုသူအများဆုံးထဲမှတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်ရှိနေလိုပါက ၎င်းသည် အရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခု ထပ်မံရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ECommerce သတင်း » စျေးကွက်ရှာဖွေရေး » ဆိုရှယ်မီဒီယာ » ဖေ့စ်ဘုတ်သမိုင်း